महिलाले किन बनाउँछन् घरेलु रक्सी ? केहीसमयअघि सामाजिक सञ्जालमा सांसद उषाकला राईले दिएको “घरेलु रक्सीलाई ‘ब्यान्ड’ हैन ‘ब्रान्ड’ गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ” भन्ने अभिव्यक्ति भाइरल भयो। तर, वास्तविकता उहाँको अभिव्यक्तिभन्दा भिन्न छ।
क्षमाप्रार्थी प्रिय पाठक ! मलाई विश्वास छ, एउटा असल पाठकले आफूलाई मन परेको पुस्तकमाथि ‘मन परेन, समय नष्ट भयो' वा 'पैसा फिर्ता देऊ’ कदापि भन्दैन– भन्नै सक्दैन। मन परेको पुस्तक पाठकले आफ्नो कोठामा सजाएर राख्छ र घत परेका वा पछिसम्म काम लाग्ने ठानिएका शब्द कोरिएका पृष्ठहरु बेलाबेला पुनः पल्टाउँछ।
मुवा: १०५ वर्षीया कोभिड विजेता हाम्रै घरमा बस्ने र मुवा (मेरो बडासासूज्यू चन्द्रकुमारी जोशी) लाई हेरचाह गर्ने नर्सलाई ६ हप्ताअघि विसञ्चो भयो। रुघा लागेको जस्तो थियो। अनि टाउको दुख्ने। तर, ज्वरो थिएन। तिहारमा उनी घर गएपछि मुवालाई एकदम खोकी लाग्यो। ज्वरो थिएन, खालि ह्वाङ ह्वाङ खोकी।
पुरुषोत्तमशमशेरलाई इतिहास सुनाउने खटपटी पुरुषोत्तमशमशेर (९५) यसै पनि ओछ्यानदेखि बाथरुम र कौशीभन्दा टाढा जान सक्दैनन्। त्यसमाथि कोरोनाभाइरस संक्रमण जोखिमका कारण विगत १० महीनादेखि कसैसँग भेटघाट गर्न नपाउँदा खटपटिएका छन्।
महिला हिंसाबारे सञ्चारमाध्यमका सामग्री न सन्तुलित, न त पीडितमैत्री ! महिला हिंसाबारे घटनाप्रधान समाचारहरु त सञ्चारमाध्यममा प्रयाप्तै आउँछन्, तर पीडकलाई कारबाहीका लागि दबाब सिर्जना गर्ने हदसम्म ‘फलो अप’ हुँदैन। न त खोजमूलक समाचार बाहिर ल्याइन्छ। महिला हिंसाका घटनाबारे पुरुषले समाचार बनाउँदाको परिणाम नै सञ्चारसामग्री असन्तुलित बनेका छन्।
आइसोलेसनमा सकारात्मक समाचारको 'अक्सिजन' पत्रकारिता कर्मको दौरान पत्रकारले नकारात्मक समाचार मात्र लेख्छन् भन्ने गुनासो मैले धेरैबाट सुनेको छु। कोरोना संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बस्दा थाहा पाएँ, सकारात्मक समाचारको बल असाध्यै ठूलो हुँदोरहेछ।
छिमेकमा घरेलु हिंसा हुँदा कानमा तेल हाल्ने तपाईं त होइन नि ! आज पनि अधिकांश व्यक्ति छिमेकमा झगडा हुँदा राति कानमा तेल हालेर सुत्छन्। हिजो जस्तै आज पनि ‘श्रीमान–श्रीमतीको झगडामा छिमेकीले बोल्नुहुँदैन’ भन्ने मानसिकता छ।